🥇 ▷ BlackView BV9600E taleefanka ruugmay ee diyaar u ah inuu dhunkado gacmahaaga isla markaaba ✅
BlackView BV9600E taleefanka ruugmay ee diyaar u ah inuu dhunkado gacmahaaga isla markaaba
Mawaxaad sugeysaa cusbooneysiinta xigta ee BlackView? Halkan waxaan kuugu haynaa qodobka ugu dambeeya ee rabitaankaaga. Soo-saaraha Shiinaha ee BlackView wuxuu diyaar u yahay inuu indhahaaga ku qabsado taleefanka casriga ah ee cusub ee ‘BlackView BV9600E’, oo laga yaabo inuu yahay guga soo socda. Shaki la’aan shaki kuma jiro cidda ku guuleysatay BV9600, oo iibisay in kabadan 8,000,000 unug oo daafaha adduunka ah.
Astaamaha BlackView BV9600E:
Hadda shirkaddu waxay higsan doontaa inay qabato guulo dhib badan gelitaanka ugu dambeysa. Iyada oo loo marayo shir jaraa’id, sumadda ayaa soo jiidatay dareenka dadka isticmaala iyaga oo ku dhawaaqay taleefan cusub oo leh qaab adag oo adag oo ay weheliso isugeynta sawirka faraha. Ka soo horjeeda dhumucda saadaashiisa. 18.7mm, BlackView BV9600E wuxuu ku yimaadaa dhumucda 9.8mm inuu noqdo lebis oo fududaato inuu shaqeeyo. BlackView BV9600E wuxuu ku yimid quraarad labada dhinacba.
Muhiimaddu waa qalabka shaashadda gudaha ku jira, ee loo yaqaan ‘AMOLED 6,21 bandhigay. Tani waa aqoonsi heer sare ah oo leh natiijooyin sax ah. Sidaa darteed, BlackView BV9600E wuxuu la imaadaa qaabeynta xusuusta 4GB / 64GB. Hagaag, Huawei waxay hubisaa koror waxqabadka chipset ilaa 70% qalabkii hore.
Taleefannada casriga ah ayaa ku fiican naqshadaha waaweyn iyo dariiqyada culus. Laakiin tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay ayaa beddeshay fikradeed waxayna bixisaa alaab isku dhafan oo fudud. Marka laga hadlayo waxqabadka, taleefanka casriga ah ee BlackView BV9600E wuxuu rakibay processor-ka MediaTek Helio P70 oo leh 2 GHz octa-core Assembly. Tani waxay ballanqaadeysaa kordhinta qiyaastii. 12% waxqabadka iyo hoos udhaca 25% isticmaalka quwada marka loo eego BV9600 Plus.
Marka taa laga reebo, taleefanka sifiican ayuu uga ilaaliyaa biyaha, boodhka, iwm. Waxeyna si guul leh ula tacaali kartaa duufaano, qoyaan, alkalis iyo walxaha kale ee xun. Isku soo wada duuboo, waxaan ka fiirsan karnaa BlackView BV9600E Rugged Smartphone sida ikhtiyaar macquul ah oo kaliya ma ahan isticmaalka banaanka, laakiin sidoo kale isticmaalka maalinlaha ah ee guriga.
Sidoo kale akhriso qoraallada ku saabsan mashruucan ugu dambeeyay ee 2019: